यस हप्ता माशप क्याम्प माउन्टेन भिउ, सीए | Martech Zone
मंगलवार, जुलाई 11, 2006 मंगलवार, जुलाई 4, 2017 Douglas Karr
यो हप्ता, म दुखी भएर म्यासअप क्याम्पको बगलमा छु। मेरो नयाँ कार्य जिम्मेवारीहरूले मलाई एकीकरणबाट फिर्ता खींच्यो र अधिक उत्पादन व्यवस्थापनमा। गत वर्ष मैले पहिलो वार्षिक म्यासअप क्याम्पमा भाग लिएँ र कार्यक्रम बनाउने व्यक्तिको प्रतिभाशाली समूहसँग द्रुत गतिमा केही मित्रताहरू निर्माण गरें। वास्तवमा, म वास्तवमै म्यासअप क्याम्प वेबसाइटहरू होस्ट गर्दछु र लोगोहरू डिजाइन गर्दछ जुन उनीहरूले यस बर्ष प्रयोग गरिरहेका छन्।
यी शिविरहरूमा जान, एक बिल्कुलै कोठामा स has्कलन गरिएको सरलता र उद्यमी प्रतिभाबाट एकदमै प्रेरित छ। यी केटाहरू हुन् जुन टेक्नोलोजीलाई यसको सीमाहरूमा धकेल्छ, बिभिन्न प्लेटफर्महरू, भाषाहरू, र आर्किटेक्चरमा सेवाहरू र अनुप्रयोगहरू बीचमा सबैभन्दा अविश्वसनीय एकीकरण निर्माण गर्दछ। तपाईंले देख्नु भएको केही प्रजातिहरूले तपाईंलाई ठक्कर दिन्छन्।
को लागी काम गर्दै एपीआई प्रदायक, यो अझ रमाईलो थियो किनकि तपाईले कसैको प्रयोगको लागि सुविधाहरू निर्माण गर्नुभयो, तर कल्पना पनि गर्नुभएन कि मान्छेहरूले तपाईंको प्रविधिहरूलाई उनीहरूको उत्पादनहरूको उत्पादनहरूमा समाहित गर्नेछन् जुन उनीहरूसँग भएको तरिकाले विकास गरेका छन्।
यदि तपाईं माउन्टेन भ्यू, CA मा हुनुहुन्छ भने यस हप्ता तपाईंको गोल्फ खेल रद्द गर्नुहोस् र म्यासअप क्याम्पमा जानुहोस्। यो एक असहमति हो कि तपाइँलाई तपाइँको आफ्नै उत्पादन प्रस्ताव कसरी विस्तार गर्ने मा एक लाख विचारहरु संग छोड्नेछ। मेरो लागि डेभिड बर्लिन्डलाई नमस्कार भन्नुहोस् (जब ऊ आफ्नो सास फेर्ने मौका पाउँदछ!)। डेभिड यस महान घटना लाई तान्न महत्वपूर्ण छ र म्यासअप पल्स मा आफ्नो औंलाहरु छ।
पक्कै पनि म त्यहाँ भएको हुन्थ्यो!
टैग: डेभिड बर्लिन्डम्यासअप क्याम्पहिमाल दृश्य
ढिलो इन्टरनेट जडान? यो ती ट्यूबहरू भरिँदैछ!